चेतावनी: QUERY प्याकेट पठाउँदा त्रुटि। PID = 1861 मा /home/admin/web/info-all.com/public_html/wp-includes/wp-db.php लाइन मा 2056
शौक | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
मृगका साथ पुरुष स्वेटर एक आत्मा संग बुनाई
प्रकाशित 15.09.2019 12.11.2019
के तपाईं आफ्नो प्रियजनको हेरचाह महसुस गरेको चाहनुहुन्छ, जब तिनीहरू तपाईंबाट टाढा छन्? तपाइँको शरीर संग गर्मी महसुस गर्न को लागी? त्यसो भए उसको लागि स्वेटर बुन्न निश्चित गर्नुहोस्। मृगका साथ स्वेटर, एक प्रिय व्यक्ति लाई प्रस्तुत, ...
Munchkin खेल: नियमहरू
हामी सबैलाई थाहा छ कि मजाका बोर्ड गेमहरू कती हुन सक्दछन्। रसियामा, बोर्ड गेम "एकाधिकार" लोकप्रियतामा पहिलो स्थान ओगटेको छ। दोस्रो स्थानमा बोर्ड खेल "मुन्चकिन" छ, जुन खुशीसँग खेलेको छ ...
मोड्युलहरुबाट फूल: फुल। आफैंमा मोडुलर ओरिगामी गर्नुहोस्
मोड्युलर ओरिगामीले बिभिन्न विषयहरूलाई समेट्छ। फूलहरू, जनावरहरू, कारहरू, भवनहरू कागजबाट बनाउन सकिन्छ। छनौट धेरै ठूलो छ। फ्लावर मोड्युलहरूको ओरिगामी कुनै पनि कोठाको आन्तरिकमा अद्भुत थप हो। यस्तो ...
DIY धातु उत्पादनहरू: सुविधाहरू, प्रकार र चित्रहरू
प्रकाशित 15.09.2019 06.12.2019
आधुनिक अवस्थामा बजार जब बृहत उत्पादित वस्तुहरूको साथमा बगिरहेको छ, हस्तशिल्पको माग बढिरहेको छ। शहरहरूमा, विशेष विभागहरू र सम्पूर्ण पसलहरू वा सैलूनहरू देखा पर्न थाल्छन्, जहाँ उनीहरू बिक्री गर्छन् ...
शतरंज कसरी खेल्ने? चेस नियमहरु
पहिलो नजर मा, यो शतरंज कसरी खेल्ने सिक्न को लागी काफी सजिलो छ जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यसले धेरै मेहनत लिन्छ र केहि आधारभूत नियमहरु कण्ठ गर्दछ। घटना घटना व्यक्तिको ...
ओपनवर्क प्याटर्न "शेल" बुनाई सुईहरूको साथ: योजना र वर्णन
लेसले बुनेको वस्तुहरूलाई विशेष आकर्षण दिन्छ। त्यसकारण शिल्पकर्मीले सकेसम्म धेरै खुला कार्य ढाँचाहरू मास्टर गर्न कोशिस गरिरहेका छन्। यो कुनै पनि कपडाको सजावटको लागि पक्का अग्नि विकल्प हो, मौसमको पर्वाह नगरी। लेखमा हामी विचार गर्दछौं यो कसरी फिट हुन्छ ...
तपाईंको आफ्नै हातले बुटहरू कसरी सजाउने। केटा र केटीको लागि बुट कसरी सजाउने
सहमत हुनुहोस् कि कुनै फुटवेयर, उच्चतम गुणस्तरको फुटवियरसमेतले शिशु फ्रिस्टमा आफ्ना बच्चाहरूको खुट्टा न्यानो पार्दैन सामान्य अनुभवी बुटहरू भन्दा राम्रो। त्यो साधारण हो। र म वास्तवमै बच्चाको खुट्टा भएको चाहन्छु ...
कसरी प्राकृतिक फर आफैले एक फर कोट मर्मत गर्ने?
एक मिन्क कोट एक वार्डरोब आकर्षण हो जुन, सायद, सबै महिला चाहन्छ। प्राकृतिक फरबाट बनेका उत्पादनहरू सँधै प्रशंसा गरिएको छ र फेसनमा थियो। चीज जति महँगो हुन्छ, त्यसलाई बढी नै सुरक्षित गर्नुपर्दछ।
घरमा नयाँ वर्षको एटेलर: हिउँ क्वीन पोशाक
नयाँ वर्ष एक रमाइलो छुट्टी हो। यो केवल एक जादुई वातावरणबाट छुट्याइएको छ, केवल आनन्दको आशा र उपहारको आशा द्वारा मात्र होइन, तर एक असाधारण कार्निवल पोशाकमा लुगा अवसरको रूपमा पनि छ कि छवि प्रयोग गर्न ...
सर्वश्रेष्ठ सेल्फी आईडियाहरू। कसरी हेर्ने ताकि सेल्फ-पोर्ट्रेट सबैभन्दा उच्च-गुणवत्ता हो?
आज, एक स्मार्टफोन क्यामेराको साथ सेल्फ-पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट्स कला फोटोग्राफीको तुलनामा अधिक लोकप्रिय विधा भइरहेको छ। यदि तपाईंलाई उत्तम मेकअप, सुन्दर हेयरस्टाइल र उच्च-गुणात्मक शूटिंगको लागि रोचक सामानहरू आवश्यक छ भने, तपाईं सेल्फी लिन सक्नुहुनेछ ...
तपाइँको आफ्नै हातले पेप्पी लांग स्टक पोशाक कसरी सिलाउने?
चहकिलो रातो कपाल भएको केटी स्विडेनी लेखकको पुस्तक कथाहरूको श्रृंखलाबद्ध पछि लोकप्रिय भयो। र यो कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन कि धेरै बच्चाहरूले कार्निवल पोशाकको लागि यो विशेष छवि छनौट गर्छन्। चमक र सरलता ...
प्रकृतिमा शरद photoतु फोटो शूटका लागि रोचक विचारहरू
प्रकाशित 15.09.2019 26.09.2019
कहिलेकाहिँ शरद sadतु दु: खी हुने र आफैलाई अपार्टमेन्टमा बन्द गर्ने समय हो जस्तो लाग्छ, तपाईको तातो ऊनको कम्बलमा बुट्टा वा चिया हातमा राखेर। तर तपाईंले कहिलेकाँही यो वर्षा र ... लाई हेर्नुहुन्न।
आफ्नै हातले कसरी डोडेकेडरोन बनाउने?
प्रकाशित 15.09.2019 15.08.2019
डोडेकेड्रन एक धेरै असामान्य त्रि-आयामिक आकृति हो जसमा १२ समान अनुहारहरू समावेश छन्, जसमा प्रत्येक नियमित पेन्टागन हो। तपाईंको आफ्नै हातले डोडेकेड्रन भेला गर्नको लागि विशेष थ्रीडी सीपहरू हुनु आवश्यक छैन।
तपाईंको आफ्नै हातले कागजको मयूर कसरी बनाउने
कागज शायद सबैभन्दा सस्तो सामग्री हो जुनसँग काम गर्न सधैं रमाईलो हुन्छ। तपाईं ओरिगामी शिल्प, पोष्टकार्ड, फूल, माला, चरा, जनावरहरू र योबाट धेरै चीज बनाउन सक्नुहुनेछ। कसरी मयुर बनाउने विचार गर्नुहोस् ...
मास्कराडमा र जीवनमा "उडान" पख्रि कसरी गर्ने?
आधुनिक क्लबहरूमा, कस्ट्युमेड मस्कराडेहरू र विभिन्न थिम भएका पार्टीहरू अक्सर आयोजित हुन्छन्। तर कार्निवल वेषभूषा मात्र उनीहरूको लागि उपयोगी छ। हामी मध्ये धेरै तस्विर शुटमा भाग लिन मजा लिन्छौं, एकदम असामान्य बनाउँदै, ...
तपाईं आफ्नै घरमा कागजहरू कसरी घर बनाउन सक्नुहुन्छ?
एक पटक कागजको आविष्कारले वास्तविक क्रान्ति ल्यायो किनकि यसले महँगो चर्मपत्रको प्रयोगलाई त्याग्न सम्भव तुल्यायो। यसका लागि धन्यवाद, पुस्तकहरूको संख्या बढ्यो, र ज्ञान अधिक व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध भयो। पहिले नै ...
जिपरमा कसरी कुकुर घुसाउने बारेमा विवरण
आज हामी तपाईंलाई जिपरमा कुकुर कसरी घुसाउने भनेर बताउँछौं। यो प्रश्न बिभिन्न कारणका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ: कुकुर फुट्न, हराउन वा रेलबाट उफ्रिदिन सक्छ। प्राय: यस्तो उत्पादन जुनसँग मिल्दो ...
कहाँ र कसरी एक स्केन्ट लालटेन सुरू गर्ने?
स्काई लालटेनहरू बिभिन्न नामबाट चिनिन्छन्, लोकप्रिय "चिनियाँ" र "चाहनाको बल" दुबै भनिन्छ। यो विश्वास छ कि गुम्बज संरचना आकाशमा छोड्नु अघि, यो आफ्नै लेख्न आवश्यक छ ...
हल्का कागज शिल्प: चित्र र फोटोहरू। बच्चाहरूसँग कागज शिल्प बनाउन सिक्दै
प्रकाशित 15.09.2019 27.11.2019
कागज रचनात्मकताको लागि एक अनुपम सामग्री हो। बच्चाहरूले यसको गुणहरू मनपराउँदछन्: कुचुरो, टुक्रा पार्नुहोस्, कैंचीको प्रभावमा कुनै पनि आकार लिनुहोस्, फ्ल्याटको परिणाम स्वरूप फ्लैट शिटबाट त्रि-आयामिक आंकडामा रूपान्तरण गर्नुहोस् ...
हामी महसुस झोला सिलाई
हालसालै, महसूस गरिएका र महसुस गरिएका विभिन्न उत्पादहरूले अधिक र अधिक लोकप्रियता प्राप्त गर्दैछन्। यी सामग्रीहरूबाट सिर्जना गरिएका चीजहरू उनीहरूको विशेष सान्त्वना र सुन्दर उपस्थितिबाट भिन्न छन्। यस लेखबाट तपाईले सिक्नुहुनेछ ...
82 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 831,448 प्रश्नहरू।